बेमौसमी प्याज खेती कसरी गर्ने ? - krishipost.com
बेमौसमी प्याज खेती कसरी गर्ने ?
एन–५३, रेड क्रिबल, पुसा रेड आदि । एन–५३ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ) बिउदर : सेट (सानो गानो) ८०–१०के.जी. प्रति रोपनी ।
सेट (गानो) रोप्न श्रावणको अन्त्यदेखि भाद्रको अन्त्यसम्म बषोट समाप्त भईसकेपछि राम्रो हुन्छ । यदि वर्षाद नसिध्धीएरै अगा लगाउँदा ठूलो पानी परी बोट राम्रोसंग फैलिन पाउँदैन र रोगको प्रकोप बढी हुन्छ । बेमौसमी प्याज खेतीको लागि सेट उत्पादन गर्ने तरिका : सेट भनेको सानो गानो नै हो । बेमौसमी प्याज खेती गर्न सेटबाट सजिलो र छिटो उत्पादन हुने हुनाले यो विधि बढी प्रभावकारी मानिन्छ । असोज देखि कात्र्तिक सम्म वा सधैंझैं प्याजको बिउ राख्ने समयमा बेर्ना उत्पादन गरी कात्र्तिक मंसीरतिर बेर्ना सार्न योग्य भएपछि वा सधैं झैं प्याज लगाउने मौसममा नै प्याज लगाउनु पर्दछ । यसरी प्याज लगाउँदा प्रशस्त प्राङ्गारिक मल ( ४५– डोको प्रति रोपनी रासायनिक मल आवश्यकता हेरी ) राखी निर्धारित दुरीमा (बोट–बोट १० लाईन –लाईन १५ से.मी.) लगाउने ।
प्याज लगाई सकेपछि आवश्यकताअनुसार सिंचाई गर्दै राख्नु पर्दछ । प्याज रोपेको केही समय पछि वा प्याजको गाना बुढी औंला जत्रो भएपछि प्याजको जमिन माथिको भाग वा पात निमोठेर लठ्ठी वा खुट्टाको सहायताले थिचीदिने । थिचेको ५-७ दिनमा प्याज पहेंलो सुकेजस्तो देखिन्छ । यो अवस्थामा बोटहरु उखेलेर माटो हटाई साना साना मुठा बनाउने र यि मुठाहरुलाई सूर्यको प्रकाश नपर्ने प्रसस्त हावाखेल्ने छाँयामा झुड्याएर राख्ने यो नै यसको प्याज सेट हो । यिनै सेटलाई श्रावणको अन्त्यदेखि भाद्रको अन्त्य वा वर्षादको अन्त्य पानी नजम्ने ठाँउ खुकुलो माटो भएको ठाउँमा ड्याङ बनाई मौसमी प्याज लगाउने तरिका, सोही दुरीमा सोही विधी अनुसार नै रोप्ने । २–२.५ महिना पछि ति साना सेट –गाना) बढेर ठूलो गाना बन्दछन् । यसरी गाना ठूलो भईसकेपछि उखेलेर बजारमा लगि बिक्री वितरण गर्ने । यो समय भनेको दशैं तिहारको समय भएकोले प्याजको माग पनि बढी हुने र बजार भाउ (मूल्य) पनि राम्रो पाईने हुँदा बेमौसम प्याज खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ । उत्पादन : अनुमानित ८००–१००० के.जी प्रतिरोपनी । गणेश प्रसाद रेग्मी
प्रशिक्षक : बेमौसमी तरकारी उत्पादन कार्यहरु